Lightinthebox တွင်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအတွက်ကြီးမားသောမြှင့်တင်ရေးသည် ၇၀% အထိရှိသည် Androidsis
Lightinthebox ကို, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာများအတွက်လူကြိုက်များတရုတ်အွန်လိုင်းစတိုးသည် ဟယ်လိုရောင်းရန်။ ပရိုမိုးရှင်းပြက္ခဒိန်တွင်ဖော်ပြထားသောရက်စွဲတစ်ခု။ Lightinthebox ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေပေးပြီးထည့်ချင်တယ်။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ပြောပြမယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များရှိခြင်းကိုအမြဲတန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်တော်တို့မကြာခဏဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်မဟုတ်သောအချို့သောကိုတွေ့သောအခါ, ဤအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့တွေ့ပြီ 70 ရာခိုင်နှုန်းချွတ်အထိပေးထားပါတယ် မူရင်းစျေးနှုန်းကျော်။
1 အကောင်းဆုံး Lightinthebox ၆ လုံးသည်ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဖြစ်သည်
1.3 Xiaomi ကမှတ်ချက် Redmi 4
1.5 M8S PRO L ကို
1.6 Xiaomi က Mi 5X
2 Lightinthebox သည်ဟယ်လိုဝိန်းမြို့ရှိအိမ်ကိုပြတင်းပေါက်မှပစ်ချလိုက်သည်
အကောင်းဆုံး Lightinthebox ၆ လုံးသည်ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဆောင်များကိုဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သင်ဝယ်ရမည့်ရက်စွဲများနှင့်အလွန်နီးကပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက်မျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်သာရှိလျှင်ကော။ ခရစ်စမတ်အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုရှာမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ပိုက်ဆံနည်းနည်းပဲချွေတာနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ်သင်ဆန့်ကျင်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆံလိုပါကဟယ်လိုဝိန်းပွဲတော်မဟုတ်လော။
သင် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကြီးမားသောစကြဝuniverseာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမပြုသေးလျှင်၎င်းသည်အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Lightinthebox သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယူဆောင်လာသည် မယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူကောင်းသောစမတ်ဖုန်း option ကို။ Mgcool Band3တွင်သင် smartband တစ်ခုမှသင်တောင်းဆိုသမျှအားလုံးရှိသည်။ ကယ်လိုရီများလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ရေခံနိုင်ခြင်း၊.
မည်သည့် application ကိုမဆို Android operating system နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောလက်ကောက်။ ဒါ့အပြင် iPhone မှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရှိပါတယ် ip68 လက်မှတ် ဒါကြောင့်ပြanyနာမရှိဘဲ splash နှင့်ဖုန်မှုန့်ကိုတွန်းလှန်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွင်သင်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်အကောင်းဆုံး။
အဆိုပါ Mgcool တီးဝိုင်း3တစ်ပါရှိပါတယ် နာရီပေါင်း ၂၀၀ မှ ၂၅၀ ကြားရှိမည့်လှုပ်ရှားမှုအချိန်ကိုကတိပေးသည်။ သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနှိုးစက်နာရီအဖြစ်အသုံးပြုပါ။ လှုပ်ရှားမှုသတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိပါ။ သင်လည်းရပါလိမ့်မယ် ဆွဲငင်အား sensor, gyro အာရုံခံကိရိယာ, အလင်းအာရုံခံနှင့် Proximity အာရုံခံကိရိယာ။ များအတွက်တစ် ဦး ကအလွန်ပြည့်စုံ option ကို သာ€ 14,27.
သင်၏ mgcool band3ကို lightinthebox တွင်အကောင်းဆုံးစျေးဖြင့်ဝယ်ပါ.
နောက်ထပ်တစ်နှစ်အတွက်လာမည့်ခရစ်စမတ်အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာရန်အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး ။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုရုပ်မြင်သံကြား၌သုံးစွဲနိုင်ရန် Android တီဗီ box တစ်ခု။ ၎င်းသည် Lightinthebox အားစျေးကွက်မြှင့်တင်ရန်ကမ်းလှမ်းသောစျေးနှုန်းကိုစဉ်းစားရန် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်
ဒါဟာရှိပါတယ် RK3229 CPU သည် Quad Core ပရိုဆက်ဆာနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သူ့ရဲ့ operating system ကနောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်ပေမယ့် Android 5.1 ဟာဒီ device ကို solvency နဲ့အလုပ်လုပ်နိူင်တယ်။ သင့်မှာအိမ်မှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီဟာကအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲ ယူရို ၁၉ ယူနစ်အတွက်တစ်လုံးရဖို့။
Scintion V88 ကို Lightinthebox တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ပါ.
Xiaomi ကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင် Xiaomi Redmi Note4နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားများစွာပြောစရာမလိုပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအားအရှိဆုံး version တစ်ခုအကြောင်းကိုလည်းပြောနေသည်။ The Xiaomi ကမှတ်ချက် Redmi4သူ၏ဗားရှင်း၌တည်၏4GB RAM နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှု.
ကျနော်တို့သက်သေပြ device ကိုထက်ပိုပြီးပြောနေတာနေကြသည်။ သူ၏နာမနှင့်ကျော်ကြားမှုသည်သူ့ရှေ့တွင်ရှိသည်။ နှင့်အတူတစ် ဦး ကစမတ်ဖုန်း ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင်. ၁၃ megapixel resolution ရှိတဲ့ကင်မရာ။ လက်ဗွေဖတ်စက်။ ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကို၎င်း၏ကျေးဇူးတင်စကားperfectlyုံအလုပ်ဖြစ်တယ် Qualcom Snapdragon 625 ပရိုဆက်ဆာ။ Lightinthebox သည်အိမ်ကိုပြတင်းပေါက်မှဖယ်ထုတ်ပြီးယူရို ၁၅၀ အောက်သာပေးသည်။
ဤတွင် Xiaomi Redmi Note4ကိုမယုံနိုင်လောက်သောစျေးဖြင့်သင်ဝယ်နိုင်သည်။
LeTV ကုမ္ပဏီသည်ငါတို့နိုင်ငံတွင်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်နိုင်သည့်ဥပမာများကိုပြသသည့်စမတ်ဖုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပို့ဆောင်ပေးသည့်နောက်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု။ LeTV Le PRO3X722 သည်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီးကြော့ရှင်းသည်.
၎င်း၏ပြီးမြောက်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုအံ့အားသင့်စေမည့် terminal တစ်ခု။ အခြားစက်တစ်ခုအကြောင်းပြောမယ် သိုလှောင်မှု 4GB နှင့်အတူ 32GB RAM ကိုပေါင်းစပ်။ အဲဒါရှိတယ် 16-megapixel ဓာတ်ပုံကင်မရာ. Fingerprint reader နှင့် ၅.၅ megapixel ဖော်ပြချက်။ Lightinthebox မှဤကမ်းလှမ်းချက်ဖြင့်ယူရို ၁၅၀ သာရနိုင်သည်။
LeTV Le PRO3X722 ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်ပါ။
M8S PRO L ကို
ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသောယခင် Android box box သည် "flimsy" သို့မဟုတ်သင်ကတိုတောင်းနိုင်သည်ဟုထင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပိုမိုအားကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုယူဆောင်လာသည်။ M8S PRO L ၏အင်္ဂါရပ်များ အန်းဒရွိုက် 7.1 ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ applications တွေအားလုံးကို update လုပ်လို့ရပါတယ်။
ထို့အပြင် M8S PRO L တွင်ပါဝါရှိသည် Youtube သို့မဟုတ် Netflix မှဗီဒီယိုများကို streaming လုပ်ရန် ultra hd resolution ကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းပါ။ သင့် living ည့်ခန်းရှိရုပ်မြင်သံကြားတွင်အရည်အသွေးနှင့် resolution ။ သူ့ Amlogic S912 Octa-Core CPU နှင့် ARM Mali-T820MP3 GPU တို့ဖြစ်သည် သူတို့ကကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆက်ကပ်။
သင်၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်များနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးပြနိုင်သောရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင်သင့်စက်ရှိလိုလျှင်၎င်းသည်သင်၏စက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Lightinthebox သည်ဟယ်လိုဝိန်းပရိုမိုးရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုသင်မပြောနိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ သင်ဖော်ပြထားသောကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့လျှင်, ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄၅.၈၆ ယူရိုအတွက် M8S PRO L ကို ၀ ယ်ပါ.
Xiaomi က Mi 5X
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မြင်နိုင်သည်မှာ ပို၍ ဆိုးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်အများဆုံးကြီးထွားနေသည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးထုတ်လွှတ်တင်မှုတစ်ခုကိုဝယ်ယူနိုင်သည်။ အဆိုပါ Xiaomi က Mi 5X ၎င်းတွင် "နောက်ဆုံးပေါ်" စမတ်ဖုန်းကသင့်အားပေးနိုင်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်.
နောက်ကျောတွင် rounded lines နှင့်အတူအလွန်အောင်မြင်သောဒီဇိုင်း။ ဘယ်ကျွန်တော်တို့ကို Xiaomi ကိုလက်ရှိလိုင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြသသည်။ Lightinthebox သည်ဤ Xiaomi ကို၎င်း၏ဗားရှင်းတွင်တင်ပြသည် 4GB RAM နှင့် 64 ROM တစ် ဦး ပြန်လုပ်မရသောစျေးနှုန်းမှာ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုပြောင်းလဲရန်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းမှုကိုသင်စောင့်နေခဲ့လျှင်နောက်ထပ်မကြည့်ပါနှင့်။
ဒီ Xiaomi မှာရှိတယ် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Qualcomm Snapdrago 5,5 Octa Core ပရိုဆက်ဆာ။ နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတူ LED flash ပါ ၀ င်သော 12 megapixel ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်. လက်ဗွေဖတ်စက် နောက်ကျောနှင့်တစ် ဦး ရက်ရက်ရောရောနှင့်အတူ 3000 mAh ဘက်ထရီ.
သင်၏ Xiaomi Mi 5X ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရယူပါ, € 177,85 ။
သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။ သင် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောအဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ရန်မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုသင်ရှာမတွေ့ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပေးခဲ့ကြသည် သင်ရှာမတွေ့နိုင်သောစျေးနှုန်းနှင့်ပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်မှုလက်ကောက်တစ်ခု။ အဲဒါကိုဝေးဝေးပေးပြီးထုတ်ပေးပါ၊ ဒါပေမဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။
သင်လိုချင်ခဲ့လျှင် သင်၏ living ည့်ခန်းအားသင်၏မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပေးပါ အကြိုက်ဆုံးငါတို့သည်သင်တို့နှစ်ခု options များပြသခဲ့ကြသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားမှဗီဒီယိုများ၊ စီးရီးများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးသော၊ ပို၍ ချွေတာသောရုပ်ပုံတစ်ခု။ ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့်စွမ်းအားနဲ့အရည်အသွေးပေါင်းများစွာနဲ့အတူပါ။
အကယ်၍ သင်လိုအပ်တာကနောက်ဆုံးပေါ်သယ်ဆောင်လာတဲ့ခေတ်ကုန်သွားတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုပြောင်းလဲပစ်မယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့အတွက်လည်းလွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ကျနော်တို့ Xiaomi နဲ့အနိုင်ရမြင်းပေါ်လောင်း။ ထိုအနှစ်ခုရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကိုသေချာထိခိုက်သည်။ ၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်ဘတ်ဂျက်ပေါ်တွင်သာမူတည်လိမ့်မည်။ Plus အားလည်း LeTV ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးတယ်အချိန်တိုင်းအနိုင်ရသောကုမ္ပဏီတစ်ခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်နောက်လိုက်များ လှပပြီးအစွမ်းထက်သောကိရိယာများနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာမှုတို့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Lightinthebox ကမ်းလှမ်းချက်များမှစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခြင်းသည်သင့်အားအကျိုးပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကုသရန်၊ လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန် (သို့) သင်၏ခရစ်စမတ်စျေး ၀ ယ်ခြင်းသို့ရောက်ရန်ကောင်းသော။ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမျိုးကိုရွေးချယ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ သင်ဘယ်လောက်ဝယ်မလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Lightinthebox တွင်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲတော်ကြီး ၇၀% ရှိသည်